Ny lahatsoratr'i Micah Heath momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Mika Heath
Azo antoka fa tsy mahazatra ny vanim-potoana fiantsenana vao haingana. Nandritra ny areti-mifindra manan-tantara, nandao ny fivarotana biriky sy mortar ny mpividy, ary ny fifamoivoizana an-tongotra Black Friday dia nihena mihoatra ny 50% isan-taona. Mifanohitra amin'izany, nitombo ny varotra an-tserasera, indrindra ho an'ny Amazon. Tamin'ny taona 2020, ny goavambe an-tserasera dia nitatitra fa ireo mpivarotra tsy miankina amin'ny sehatra misy azy dia namindra entana $4.8 tapitrisa tamin'ny Black Friday sy Cyber ​​Monday - niakatra 60% tamin'ny taon-dasa. Na dia miverina amin'ny laoniny aza ny fiainana any Etazonia